२५ पटक चक्कु हानेर महिलाले प्रहरीलाई फोन गरेर भनिन्– ‘बलात्कारीलाई मारिदिएँ’ - Janadesh Khabar
१५ कात्तिक २०७७, शनिवार
२५ पटक चक्कु हानेर महिलाले प्रहरीलाई फोन गरेर भनिन्– ‘बलात्कारीलाई मारिदिएँ’
जनादेश खबर	काठमाडौं	कात्तिक १, २०७७
काठमाडौं। पटक पटकको बलात्कार र ब्ल्याकमेलिङबाट आजित भएकी एक महिलाले बलात्कारी युवकलाई चक्कु हानेर मारिदिइन् त्यसपछि प्रहरीलाई फोन गरेर भनिन् ‘बलात्कारीलाई मारिदिएँ ।’ हिन्दूस्तान टाइम्समा प्रकाशित समाचारअनुसार घटना भारतको मध्य प्रदेशको गुना जिल्लाको हो । ती महिला यी बलात्कारीबाट यतिसम्म आजित भएकी थिइन् कि उनले ती युवालाई लगातार २५ पटक चक्कु प्रहार गरेकी थिइन् ।
महिलाका अनुसार यी व्यक्तिले २००५ देखि उनलाई बलात्कार गरिरहेका थिए । त्यतिबेला उनी नाबालिग नै थिइन् । प्रहरीको जाँचमा भएको खुलासा अनुसार ती व्यक्तिको नाम बृजभूषण शर्मा हो । उनी अशोकनगरका बासिन्दा हुन् । महिला पनि अशोकनगरकै हुन् । महिलाका अनुसार उनी १६ वर्षकी हुँदा बृजभूषण शर्माले उनलाई बलात्कार गरेका थिए । त्यसपछि कैयौं पटक उनले डर धम्की देखाएर उनलाई बलात्कार गरिरहे ।
पछि महिलाको एक शिक्षकसँग बिहे गरिन् ताकि बृजभूषणबाट पिछा छुटाउन सकियोस् । बिहेपछि महिलाले एउटी छोरी पनि जन्माइन तर बृजभूषणले उनको पिछा छोडेनन् । घटनाको रात महिला घरमा एक्लै थिइन् त्यही बेला बृजभूषण घरमा आए । उनी नशामा थिए र उनले त्यस दिन पनि महिलालाई जबरजस्ती गरे । अन्ततः उनको धैर्यको बाँध टुट्यो र उनले चक्कु हानेर बृजभूषणको हत्या गरिदिइन् । बृजभूषण नशामा थिए त्यसैले धेरै विरोध गर्न पनि सकेनन् । महिलाले उनको शरीरमा २५ पटक चक्कु प्रहार गरेको पाइएको छ ।
हत्यापछि महिलाले स्वयं प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् । प्रहरीलाई फोन गरेर उनले आफूले बृजभूषणलाई मारिदिएको स्वीकार गरेकी थिइन् । महिलाको फोनपछि प्रहरी घटनास्थल पुग्दा त्यहाँ बृजभूषणको शरीर नग्न अवस्थामा थियो । उनको शरीरभरी घाउ थियो र रगत बगिरहेको थियो । प्रहरीले नजिकै हत्याको लागि प्रयोग गरिएको धारिलो चक्कु पनि बरामद गरेको छ । प्रहरीले महिलालाई हिरासतमा लिएर थप कानुनी कारवाही अगाडि बढाएको छ ।
१ कात्तिक २०७७, शनिवार १३:१९ बजे प्रकाशित
ज्ञानेन्द्र शाहले यस वर्ष दशैंमा नागरिकलाई टीका नलगाउने
टेक्सासमा एक नेपालीलाई हृदयघात, १८ दिनसम्म होस् खुलेन
बास्कोटाले ७० करोड डिल गरेको भिडियो मंगलबार अख्तियारलाई बुझाउदैछु : विजय मिश्र
अनिल झाले महिलालाई हेपेर बोलेको भन्दै रेखा शर्माले आपत्ति जनाइन्
भारतीय सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी नदेउ
टर्कीमा ७ म्याग्‍निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प
‘मुकेश चौरसियाको हत्याका योजनाकार राजकुमार गुप्ता’
दसैँपछि काठमाडौँ फर्किनेको संख्या न्यून
ओलीलाई देउवाको फोन : अविस्वास प्रस्ताव आए विपक्षमा उभिन्छु, तर …
यी हुन प्रचण्डलाई मनाउन ओलीले खटाएका दुई नेता, जो खुमलटार धाइरहेका छन्
‘प्रचण्ड’को हत्या गर्न ‘रअ’ प्रमुखको गोप्य भेटघाट भएको त होइन ?
नेकपा जुनसुकै बेला फुट्न सक्छ : प्रधानमन्त्री ओलीको संकेत
निषेधाज्ञा तोडेर भए पनि भदौ २५ देखि व्यवसाय खोल्ने निर्णय
वर्षमान पुन र बिना मगरलाई मन्त्रीबाट हटाउने तयारी
Copyright © 2020 janadeshkhabar.com All Rights Reserved. Designed By Sanjeev Barma